Lcc निकलाग्दो चेक वाल्व को सफाई - समाचार - Zhejiang Yongyuan वाल्व सह लिमिटेड
Lcc Flange चेक वाल्व को सफाई
को सफाईLcc Flange चेक वाल्व
Lcc Flanged चेक वाल्व पाइपलाइन र उपकरण मा मध्यम को backflow रोक्न को लागी प्रयोग भल्भ को एक प्रकार हो। निकासी निकुञ्ज जाँच वाल्व भाप निकासी र भाप टर्बाइन इकाई को गर्मी रिकभरी प्रणाली को बाह्य हीटर को प्रत्येक निकासी पाइप मा स्थापित छ। यसको कार्य स्वचालित रूप बाट भल्भ प्लेट बन्द गर्न को लागी हुन्छ जब इकाई को हीटर र भाप इनलेट पाइप को भाप पक्ष लाई रोक्न को लागी उतारिएको छ भाप मा भाप स्टीम टर्बाइन मा फिर्ता खन्याइएको छ, स्टीम टर्बाइन को कारणले ओभरस्पीड।
1. वाल्व विघटन
(१) पहिले टोपी र भल्भ शरीर को बीच मा फिट चिन्ह लगाउन एक मार्कर पेन को उपयोग गर्नुहोस्, तब टोपी बोल्ट ढीला र टोपी हटाउनुहोस्।
(२) लिभर शाफ्ट र वायवीय नियन्त्रण सीट को जोड्ने पक्ष मा असर, तेल कायम राख्ने रिंग र लीभर हटाउनुहोस्;
(३) ठूलो सील कभर अखरोट छोड्नुहोस् र ठूलो दबाव रिंग हटाउनुहोस्।
(4) मिल्दो अंक बनाउन पछि, ठूलो कोष्ठक को फिक्सिंग बोल्ट ढीला र ठूलो कोष्ठक हटाउनुहोस्;
(5) लीभर शाफ्ट र झाडी हटाउनुहोस्;
()) सानो कोष्ठक र रकर शाफ्ट पक्ष मा सामान हटाउनुहोस्;
()) सानो दबाव को औंठी मा फिक्सिंग अखरोट छोड्नुहोस्, सानो दबाव को औंठी हटाउन, र यो मात्रात्मक राख।
()) मिल्दो निशान बनाइसकेपछि, फ्लेन्ज कभर मा फिक्सिंग बोल्टहरु ढीला र फ्लेन्ज कभर हटाउनुहोस्;
(9) घुमाउने हात र भल्भ कोर हटाउनुहोस्;
(१०) घुमाउने हात र भल्भ कोर बाहिर लिनुहोस्;
२ को दृश्यLcc Flanged चेक वाल्व
(१) भल्भ कोर र भल्भ शरीर मा भल्भ लाइन जाँच गर्नुहोस्। त्यहाँ कुनै नाली, pores र सील सतह मा निशान हो कि भल्भ लाइन मा सील प्रदर्शन लाई प्रभावित गर्दछ, र त्यहाँ सम्पूर्ण परिधि भर मा सम्पर्क मा कुनै बाधा हुनु हुँदैन। यदि कुनै दोष छ कि सील प्रदर्शन लाई प्रभावित गर्दछ पाईन्छ, यो पीस गरेर उपचार गर्नुपर्छ।
(२) भल्भ पुतली र घुमाउने हात को बीच जडान को जाँच गर्नुहोस्, र गैसकेट र घुमाउने हात को बीच को अंतर १ मिमी र १.२ मिमी को बीच समायोजित गर्नुहोस्। यो धेरै ठुलो वा धेरै सानो हुनु हुदैन, अन्यथा यो समायोजित गर्नु पर्छ। भल्भ पुतली र घुमाउने हात को बन्धन अखरोट दृढता संग जोडिएको हुनुपर्छ, स्थिति वेल्डिंग बिन्दु पूरा र दरारहरु को मुक्त हुनुपर्छ, र भल्भ तितली शाफ्ट र घुमाव हात को औंठी को बीच को अंतर आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्नुपर्छ।
(३) लीभर शाफ्ट, रकर शाफ्ट र ठूलो र सानो bushings र रोप्ने हात बीचको अन्तर जाँच गर्नुहोस्। प्रत्येक शाफ्ट को सतह र झाडी को भित्री पर्खाल चिकनी र गड्ढे बाट मुक्त हुनुपर्छ।
(4) ठूलो सील कभर र निकलाएको आवरण मा पैकिंग जाँच गर्नुहोस्। तिनीहरू बरकरार हुनुपर्छ, र यदि क्षतिग्रस्त भए उनीहरुलाई प्रतिस्थापन गर्नु पर्छ।
(५) भल्भ कभर र वाल्व शरीर को सील सतह नाली, छाला र मर्मत खरोंच छ कि सील प्रभाव लाई प्रभावित बिना अक्षुण्ण हुनुपर्छ जाँच गर्नुहोस्।
()) सफा र कोष्ठक, निकुञ्ज कभर र भल्भ आवास को जंक्शन मा सील सतह जाँच गर्नुहोस्। पुरानो gaskets सील सतह मा फँसिएको सफा र टाढा फाल्नु पर्छ। सीलिंग सतह मा कुनै दोष छैन कि सीलिंग प्रभाव लाई असर पार्नु पर्छ।
3. वाल्व स्थापना
भल्भ स्थापित र पुनर्स्थापित गर्नु भन्दा पहिले, शाफ्ट र झाडी को सतहहरु लाई मोलिब्डेनम डाइसल्फाईड पाउडर संग जोगाउनु पर्छ जब सम्म कि उनीहरु चमकदार छैनन्। Reassembly विधानसभा चिन्ह अनुसार disassembly को उल्टो क्रम मा गरिनु पर्छ
(१) पछि भल्भ पुतली रकर हात संग जोडिएको छ, समायोजन ग्यास्केट को मोटाई समायोजित गर्न सकिन्छ कि भल्भ तितली स्विच को रोटेशन कोण निर्माता द्वारा आवश्यक कोण पुग्छ। त्यस पछि, कसने अखरोट भल्भ तितली संग दृढतापूर्वक वेल्डेड ठाउँ हुनुपर्छ।
(२) लीभर शाफ्ट, रकर आर्म शाफ्ट र रकर आर्म भेला गर्दा, लीभर शाफ्ट र रकर आर्म एन्ड को बीच १ देखि १.२० एमएम को निकासी हुनु पर्छ, र रकर आर्म शाफ्ट र रकर को समायोजन स्पेसर हातको अन्त्य।
(३) जब घुमाउने शाफ्ट र लीभर शाफ्ट को बाहिरी भाग मा भल्भ आवास संग जोडिएको कोष्ठक र फ्लेन्ज कभर को स्थापना र कडा, स्विच निष्क्रिय हुन बाट रोक्न दुई शाफ्ट ध्यान केन्द्रित राख्न ध्यान दिनुहोस्।
(4) दुबै छेउमा पैकिंग compacting को प्रक्रिया मा, प्रत्येक अक्ष को आवागमन सुनिश्चित गर्नु पर्छ।
(5) सबै सील gaskets अपडेट गरिनु पर्छ।
अघिल्लो:गेट वाल्व को संरचनात्मक विशेषताहरु
अर्को:ग्लोब वाल्व को परिचय